ဗင်နီဇွဲလားတွင် ရစ်ခ်ျတာစကေး ၇ ဒသမ ၃ ရှိ အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်၊ လူအသေအပျောက်နှင့် ပျက်စီးမှု - Yangon Media Group
ဗင်နီဇွဲလားတွင် ရစ်ခ်ျတာစကေး ၇ ဒသမ ၃ ရှိ အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်၊ လူအသေအပျောက်နှင့် ပျက်စီးမှု
ကရာကတ်စ်၊ သြဂုတ် ၂၂
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ အရှေ့မြောက် ပိုင်းကမ်းခြေဒေသတွင် ပြင်းအား ရစ်ခ်ျတာစကေး ၇ ဒသမ ၃ အဆင့်ရှိသော အင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခု သြဂုတ် ၂၁ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ၃၁ မိနစ်အချိန်က လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်ဟု ဗင်နီဇွဲလားမြေငလျင်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းက သြ ဂုတ် ၂၁ ရက်က သတင်းထုတ် ပြန်လိုက်သည်။
ငလျင်သည် Sucre ပြည်နယ် Yaguaraparo မြို့ အရှေ့တောင် ဘက်အနက် ၁၉ ကီလိုမီတာ အကွာ၌ ဗဟိုပြု၍ လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၌ ၁၉ဝဝ ပြည့်နှစ်မှစတင်ကာ အင်အားပြင်း ငလျင်များ မလှုပ်ခတ်သေးဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး နက်စတာရီဗာ ရိုးလ်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအင်အား ကြီးမားသောကြောင့် မြို့တော် ကရာကတ်စ်၏ လမ်းများ၊ နေအိမ် နံရံများ အက်ကွဲခဲ့ရသည်။ အနီး ပတ်ဝန်းကျင်ပြည်နယ်များဖြစ်ကြသော Nueva Esparta, Monagas Bolicvar စသည့် ပြည်နယ်များအပြင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမြို့တော် ဘိုကိုတာအထိ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခြင်းကို ဒေသခံများသိသာစွာခံစားခဲ့ရသည်။ အမေရိကန်ပစ္စဖိတ် ဆူနာမီသတိပေးဌာနမှ ဆူနာမီလှိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင် ကြောင်း သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း ဆူနာမီဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ခြင်းမရှိ၍ ကြေညာချက်ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ငလျင်သည် မဂ္ဂနီကျုပြင်းအား ပြင်းထန်၍ ပျက်စီးဆုံးရှုံး မှုနှင့် လူအသေအပျောက်ရှိနိုင် သော်လည်း သတင်းအသေးစိတ်လတ်တလော မရရှိသေးဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုလိုက်သည်။
ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းအတွက် မြေငှားစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် မြန်မာနှင့် အီတာ
မြန်မာ့ရေပိုင်နက်တွင် ငါးသယံဇာတနှင့် ပင်လယ်ပြင်ဂေဟ စနစ်များ လေ့လာမည့် နော်ဝေ Dr.Fridtjof Nansen သုတေသ??
မိန်ဘလာတောင် (ဂျပန်တောင်)တွင် စစ်ကျန်ရတနာပစ္စည်းများ ကနဦးစမ်းသပ်တူးဖော်လေ့လာခွင့်ကို အချိန
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအပါအဝင် အချက်သုးံချက်ကို မုံရွာမြို့ခံအဖွဲ့အစည်းပေါင်း??